Ungakugqoka Kanjani Ukuphrinta Kwehlobo Ukusebenza - Isitayela
Nakhu ukuthi ungagqoka kanjani ukuphrinta kwakho kwehlobo okuthandayo ukuze usebenze
Ama-Florals, i-gingham namachashazi e-polka akuyona into oyicabangayo uma kukhulunywa ngokugqoka emsebenzini entwasahlobo nasebusika. Kepha sithi asikho isizathu sokubekisa le mibhalo emnandi yangempelasonto.
Ukugqoka emaphepheni kumayelana nokulingana nokusebenza ngaphakathi komndeni wombala ukwenza ukubukeka kuhlangane. Thatha umkhondo ekubukekeni okuphelele komsebenzi lapha:
i-eyeshadow yamehlo ansundu amnyama
Uma ugqoke amachashazi opolka, ikakhulukazi ehhovisi, kungcono ukugcina okubhaliwe kusikali esincane — kuncane iMinnie Mouse, okuningi uMarilyn Monroe. Siyasithanda lesi siketi se-tan microdot kanye ne-cap-sleeve elula emnyama nebhande elincane. Phonsa izimbadada zedolobha futhi usulungele ukuhamba.
ungayeka kanjani ukuphelelwa yithemba
Ukusebenza emndenini ofanayo wombala oluhlaza okwesibhakabhaka, uyakwazi ukuhlanganisa imivimbo nesiketi sepensela esingabonakali. I-blazer yasolwandle iyidonsa yonke ngaphandle komthungo.
Imivimbo ukuphrinta okuyisisekelo kakhulu ukusebenza kunoma iyiphi ingxenye yekhabethe lakho lomsebenzi. Le top engenamigqa engaphansi enesiketi se-midi sowesifazane nezimbadada zedolobha zenza ukubukeka okuhle kweziphuzo zomsebenzi nezangaphandle.
uthola kangaki ukugcwaliswa kwezindebe
IGingham ingenye yemibhalo eyinselele kakhulu ukuphuma ehhovisi. Kuyafaneleka ehhovisi lapho kwenziwa endaweni yokuthengisa izinwele. Futhi ungakhetha ihembe le-gingham elisezinkinobho ukubhanqa nesiketi se-midi. Ibhande elinsundu noma elimnyama namaphampu alula kuyadingeka nge-gingham ukunikeza umsebenzi wakho wasehlobo ukubukeka kwesikhalazo esenzelwe wena ngokwengeziwe.
izimbali eziphakeme zezimbali zebikini
Mascara engcono yevolumu nokwelula
ukususa izinwele ebusweni besikhumba esibucayi
izindleko zomjovo wezindebe ze-juvéderm